Dhisay Si faana PT. 2 — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dhisay Si faana PT. 2
Air Jordans waa halyeey. Anigu ma aan xirtaan iyaga wax badan kor u sii kordhaya in kastoo, sababtoo ah waalidka aan diiday inuu ridiculously ii soo iibsadaan kabo qaali. Anigu ma jeclaan, laakiin waxaan ogaa in aan marnaba heli lahaa gacmahayga on labo ka mid ah. Sidaas waxaa waxaan qasbay inay qabsadaan - by iska iyagu ma ay jiraan. Waxaa la lamaane dheer oo sannado isku dayaya inaan ka dhaadhiciyo in tababarayaasha cross Reebok ahaayeen horyalka. Laakiin sidii aan helay ka weyn, Waxaan ogaaday Jordans ahaayeen adag tahay in la iska indha. All of saaxiibaday lahaa labo ka mid ah ama labo, iyo mid ka mid ah saaxiibaday ayaa lagu darana Waali iyaga la.
Marka style cusub oo soo baxay, ayuu joojin lahaa oo kaliya by labiska Foot maxalliga ah markii uu waqti qaar ka mid lacag la'aan ah; ayuu naftiisa dhisay hareeraha qaadan in labada ciyaaryahan cusub. Oo wuxuu kaloo sameeyey hubaa inuu yiqiin oo dhammu taariikhaha sii daayo Urdun, ayuu iibsan lahayd kabaha isla midabbo kala duwan, oo uu inta badan ku qarash gareen doonto subaxa Sabtida degeen baxay hore ee dukaamada kabaha. Waxaa afuufeen maankayga. Sidaas dambeyntii waxaan lahaa inaan ku weydiin, “Waa maxay sidaa gaar ah oo ku saabsan kabo, kuwaas oo?! Waxaa cad waxaan seegay wax.”
My saaxiib ayaa jaceeylka la Jordans dhigay war qoraal ah oo. Haddii ay run tahay ama aan, uu ku yidhi cod dheer oo cad in kabaha kuwanu waxay ahaayeen qiimihiisu rearranging aad nolosha. Waa maxay nooca war uusan noloshaada ka dhigi?
Maxaa Ma waxaad?
In aan last_ post, Waxaan ku dooday in ay tahay in aan u isticmaalno hadalkayaga ku faanin Ilaah halkii nafteena. Oo xataa waxaan tegey dheeraad ah, oo wuxuu ku yidhi in Ilaah noogu sameeyey sabab ah in aad u. Laakiin uma maleynayo noo raacday waa in la koobnayn hadalkayaga. Ma aha oo kaliya waa in aan ku faana ee Rabbiga la dibnaha, Sidoo kale waa in aan ku faana isaga la nolosheena.
Wax kasta oo aad sameyn dhigaysa qoraal ah oo ku saabsan Ilaah. kasta oo hadhuudh ah oo aad cuni, imtixaanka kasta oo aad qaadato, saacad kasta oo aad shaqayso ayaa sheegay in wax xumu. Sidaas xataa haddii aad doorato in aad sii afkaaga la xiray isaga oo ku saabsan, nololeedkaaga weli heysan doono badan in la yidhaahdo. Su'aashu waxay tahay: waxa aad ku leh?
Works Good waayo, Ilaah a Good
In uu wacdintii ugu caansan, Ciise wuxuu ku yidhi this: "Iftiin ha ka ifo ka hor dadka kale, si ay u arkaan ay shuqulladiinna wanaagsan oo ammaanaan Aabbihiinna jannada ku jira " (Matthew 5:16).
Ciise dhagaystayaasha uu sheegayaa in ay ku noolaadaan noloshooda oo dhalaalaya, buuxa xagga shuqullada wanaagsan ka hor dadka kale. Laakiin aad aragto uusan dhihi, "Si ay dadku u arki doonaa sida la yaab leh Masiixiyiintu waa." Goolka aan waa ammaan, laakiin in kuwa kale lahaa "in la siiyo ammaan [our] Aabbahay kan jannada ku jira. "Shuqullo wanaagsan Our mar walba farta Ilaaheenna fiican in.
Ka fikir waxa ku saabsan. Maxay yidhaahdo oo ku saabsan Ilaah haddii aynu nahay dad danayste kuwa lagu daweeyo dadka kale sida qashinka? Muxuu in xiriiro Dadka Dayi? Ma aha oo kaliya ayey sheegeen in uunka Ilaah waa buray, laakiin waxa ay sidoo kale la xidhiidhaa in aynu ku jirno xarunta of caalamka. Midkoodna waxyaalahaas waa run, oo aan asal ahaan been ah oo ku saabsan Ilaah in kuwa kale.
Laakiin waxa haddii halkii, waxaan ahaayeen si weyn daniiste iyo nolosheena hoos u Deriskayaga dhigay? Maxaa dhacaya haddii aan siiyey deeqsinimo leh si ay uga caawiyaan la kulmaan baahida kuwa kale? Waa maxay nooca war aanu ka dhigi ku saabsan Ilaah? Waxay wax ka qabtaan oo aynaan ka tahay xarunta Caalamka iyo in ay jiraan wax ay ku noolaadaan grand nolosheena waayo,. Waxa ay muujinaysaa in uunka Ilaah waa in la tari jirtay, iyo in aan rabno in aan dadka kale u jeclaataa sida aan la jeclaa isaga by.
go'aan kasta oo aad ka dhigi waa fursad lagu noqon muraayad, oo muujineysa wanaagga Uumahaaga. labaad kasta waa fursad ah in uu noqdo kormeere, bandhigaya snapshots of Ammaantiisu. Oo markii kuwii nagu wareegsan qaadi bidhaaminaya wanaag in, waxaan ka heli in ay u sheegaan in nuur yahay kaliya mid muujisa arag darnaayeen oo.
Runta waxa ay tahay, faanayay la nolosheena iyo dibnaha aado gacanta ee gacanta. Haddii aan kaliya ku faana la nolosheena, dadka u qaadan si aannu u tahay dadka kaliya fiican. Iyagu ma ay ogaan doonaan kuwa na qasba in ay ku noolaadaan noloshooda wanaagsan sida. Oo haddii hadalkayaga odhan Ilaah waa la yaab leh, laakiin nolosheena si kale ku odhan, sheegashada noo lumin kalsoonidii. Waa in aan labada samayn.
Samee Waxaa Clear
noloshaada ma odhan waxyaalo waaweyn oo ku saabsan Ilaah? Your sticker go'ay xariif ah iyo tattoo Christian kuma filna. Maxay numbarka odhan? Waa maxay samayn isdhexgalka aad la kalena waxay yidhaahdeen? Muxuu yahay shaqada aad odhan? Waan ogahay in aan u leeyihiin in ay maalin kasta ka toobad keenin ku guuldareysteen inay ku faana ee isaga sida waa I. Ilaah waa wayn oo dhan kor ku xusan, sidaa darteed marka aan ku noolahay hab ka dhigaya isaga fiirin yar aan been ku noolaad.
Ma jiraan wax in Caalamka ka qiimo badan galmo caadi ah, ama kor u qaadida shaqo, ama labo ka mid ah Jordans? Dabcan waxaa jira. Hubi in aad nolosha ka dhigaysa in cad. Waxa ay u egtahay howl culus aya hortaala, laakiin ha ka welwelin - ayaa aad dhisay, waayo,.
Chymdii • August 27, 2013 at 1:55 pm • Reply
Tani waa si xeeldheer! Waad ku mahadsan tahay wax badan u samaynta i garan karo…Ilaah ha idiin barakeeyo!
Meshan • August 27, 2013 at 2:00 pm • Reply
post weyn!!! Ilaah adiga iyo qoyskaaga ammaan.
patriciadorimain • August 27, 2013 at 2:00 pm • Reply
mahadsanid Eebahaa eraygan
SdoubleU • August 27, 2013 at 5:20 pm • Reply
blog kale oo weyn! Ilaah waa run ahaantii la isticmaalayo this ee noloshayda.
qaniinyada • August 28, 2013 at 12:48 waxaan ahay • Reply
aad u sax ah
Xusuuso: Maxaan Read Online – 08/28/2013 (a.m.) | emeth Aletheia
KThomp • August 27, 2013 at 9:18 pm • Reply
muuqaal Great noo 80s iyo 90s kids wacdoomi Zaman Webi Urdun baaskeeda. Nasiib darro, Weli waxaan arki qaar ka mid ah kid in igu jira oo marar badan ma oga ilaa ka dib markii aan reprioritized kaliya ku filan oo noloshayda inuu ku saxaroodo ah wax. Rabbiga ammaana, waayo, nimcadiisa, iyo Dambi Dhaaf! Bishaareeye waxaan guud ahaan blog orday, sii qoraal isaga, waayo,.
tiffleroux • August 27, 2013 at 11:02 pm • Reply
Xaqiiqdii waan ku riyaaqayaa waxbariddiinnii. Waa hubaal mid ka mid ah hadiyado aad!
qaniinyada • August 28, 2013 at 12:46 waxaan ahay • Reply
i heli iyocadhadii filan of this. aragtiyo Great iyo Trip cilmiga!!
Anigu ma aan ahay • August 28, 2013 at 10:32 waxaan ahay • Reply
i siiyey badan in aad ka fikirto..
HannahWell • August 28, 2013 at 10:57 waxaan ahay • Reply
Tani waa si taabashada. Waxaa runtii aad aad la yaabanahay sida badan waa fudud yahay Ilaah run ahaantii sugayeen ayaa iyada oo noloshaada.
Time ii si ay u sameeyaan baaritaan roob iyo qiimeynta wanaagsan.
Ku mahadsan tahay in aad safar Lee <3
Michael • August 28, 2013 at 11:40 waxaan ahay • Reply
Thanks waa waxa aan dhab ahaantii la tacaalayaan, isticmaalaya erayadayda si ay u faafiyaan ammaanta Ilaah. Waxaan jeclahay in aynu falalka aan samayn hadal ah, laakiin aan ku filan oo aan noqdo ka badan ka warqabaan in. Thanks for this oo i dhiirri-galinaysa in si dhab ah u baxaan halkaas oo ay ku kala Kalimadiisii. inaan dhab ahaantii waxaan ka baxday on my campus ka dib in ay la hadlaan dadka ku saabsan Ciise. is faanin TGS isaga on!
TreverlyHillz • August 28, 2013 at 12:03 pm • Reply
kani waa maaddo aad u adag. Laakiin waxa ku saabsan diinta kiristaanka waa u fududahay, xaq u? dhib ayaa ii soo baxdo in aan nolosha ku nool si ay dadku u arkaan in ay tahay iftiinka Ilaah Ifid ma ahan oo keliya iftiinka nin kale oo fiican. Su'aal bulshada: Maxay yihiin dhowr nonverbals in aan dari karaa si ay dadku u kala karo nolosheena ka nolosha kale “nice & adeegaya” dadka?
Xusuuso: Waa maxay Your Life ku yidhi? |
Arlicia • August 28, 2013 at 1:22 pm • Reply
Waxaan ahay si fudud Noloosheedu by conformation daad Eebe by hab oo aad blog. In laba jeer oo kala duwan, aan asal ahaan qoray oo ku saabsan waxyaalahaas oo kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan qoraallada aan idinla wadaagno. xitaa aan ku sameeyey isbarbardhigga Webi Urdun oo dhan,!!!! Sidoo kale Matthew 5:16. Fadlan ii soo sheeg meesha aan wadaagi karaan qoraallada aniga ii gaar ah is xukunka. runtii waxaan leeyahay mas'uuliyadda awood leh oo aan qalinka iyo farabadnaa cad ka dib markii reading aad blog!!! Thanks for sharing!!!
Renatto • August 28, 2013 at 1:22 pm • Reply
post Great! Loolan iyo ku dhiirri-galiyay.
Holly • August 28, 2013 at 2:37 pm • Reply
Wow- waxaa qodbay! Thnk U, waayo, jidaynayey r Ilaah gr8 2 U isticmaalaan si run ha kula hadlo! Waxaan murtida lyrics ah & isku day in aan adag 2 ku nool by: 'Naftayda ha la tusa jacaylkiinna'. Maalin kasta waan ku baryayaaye,, Sayidow, ii isticmaali for ur ka Nasahanyahay maanta '.
Mahadsanidiin & ❤ Trip :c)
sleems • August 28, 2013 at 3:36 pm • Reply
Aan ku faana on! Waayo, Rabbigu wuxuu.
Ndwila • August 28, 2013 at 7:12 pm • Reply
U Rily laynaysa blessin a in badan oo ii gaar ahaan!
UnhaeHan • August 29, 2013 at 4:33 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan u dhiirigelinta. Waxaa i qasba si loo hubiyo aan bankbook xumadiisa iyo ...
Ka dhig kor u shaqo wanaagsan!
Mallory • August 29, 2013 at 3:24 pm • Reply
Thanks for this! aragtiyo waxaa dhiiri oo ku canaano. Waxaan def ma Ilaah siin credit la afkayga sidii aan ugu yeedhay inaan sameeyo. Good si aad u aragto Word ee in aan loo yaqaan ku faano…iyo in ay tahay wax wanaagsan!
YouthExplosionForChrist • September 1, 2013 at 10:38 waxaan ahay • Reply
site Tani waa cajiib ah ,aad yididiilo leh. Doonaa in la wacdiyada aad la wadaago iyo yaraantayadii. Your music ayaa horay u waxyoonay, inay leeyihiin hab kale si ay u siiyaan erayga Ilaah in ay noqon doonaan oo korodhso in had iyo jeer waa barako sida a. Waad ku mahadsan tahay jawaabay call. Ilaah ammaan.
Xusuuso: Views & Twitter: September 4, 2013
Godson • September 5, 2013 at 11:52 waxaan ahay • Reply
No dheer ku dayn doonaa, dabeecadda aadanaha u yeerin aan dhaqanka, laakiin waxaan u baryayaa in kii i abuuray, ogolaanayaa igu noqday sidii Badbaadiyahayga